झापाकै पूरानो गौरादह वजार व्यवस्थित गरिदै::Hamrodamak.com
झापाकै पूरानो गौरादह वजार व्यवस्थित गरिदै
गौरादह ,२८ जेठ / साप्ताहिक रुपमा दुई दिन हाटवजार लाग्दै आएको झापाकै पूरानो वजार गौरादहलाई व्यवस्थित बनाउन शुरु गरिएको छ । वजार क्षेत्रलाई थप सुविधासम्पन्न बनाउन नगरपालिकाले गुरुयोजनाका साथ काम शुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
गौरादह नगरपालिका वडा नं. १ मा पर्ने मुख्य बजार बढ्दो जनघनत्वसंगै अव्यवस्थित र साँघुरो हुन थालेपछि व्यवस्थित बनाउने कार्य थालिएको नगर प्रमुख रोहितकुमार शाहले बताए । त्यहाँ आइतबार र बिहीबार हाटवजार लाग्दै आएको छ । बजारमा व्यवस्थित टहराका ब्लक, ड्रेन, पार्क, आकर्षक पानीका फोहोरा, गार्डेन, पार्किङ, पुस्तकालयलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी काम थालिएको नगरपालिकाका सवइन्जिनियर प्रेम बाँस्तोलाले जानकारी दिए ।
गौरादह बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खड्गराज थापाका अनुसार बजार निर्माणमा कुल रु दुई करोड २० लाख हाराहारीमा खर्च लाग्ने छ । बजारमा व्यापारीका लागि पसल राख्न व्यवस्थित १३ वटा टहराका ब्लक निर्माण गरिने छ । टहरा निर्माणमा रु एक करोड ४४ लाख १७ हजार २ सय ७१ रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । त्यस्तै बजार क्षेत्रको चारैतिर ढल व्यवस्थापन हुने गरी ड्रेन निर्माण गरिने छ । डे«नका लागि रु ३२ लाख ३९ हजार ५ सय २० रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा निर्माण हुने वजार क्षेत्रको थोक बजार, खुद्रा बजार, मासु, माछा, फेन्सी पसलका व्यवसायीक स्टल रहने छन् । बजार निर्माणका लागि आवश्यक तयारीका साथ काम थालिएको वडा नं. १ का वडाध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीले बताएका छन् ।
गौरादह जिल्लाको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रहरु गौरादह, बैगुन्धुरा, महारानीझोडा, कोहबरा, जुरोपानी, कोरोबारीको मुख्य बजार हो । गौरादह बजारमा २ हजार ४ सय दर्ता भएका व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्दै आएको उद्योग वाणिज्य संघ गौरादहका अध्यक्ष जीवन राईले जानकारी दिए ।